Ciyaaryahannada u sharraxan abaal-marinta xiddigii ugu fiicnaa bishii April ee Premier League oo la shaaciyey – Gool FM
(England) 06 Maajo 2017 – Xiddigaha u sharraxan abaal-marinta Laacibka ugu fiicnaa horyaalka Premier League bishii dhammaatay ee Abriil ayaa la shaaciyey, waxaana abaal-marintan ku tartami doona 7 ciyaaryahan.
Kooxda Tottenham Hotspur ayaa abaal-marintan waxaa ugu tartami doona saddex ciyaaryahan waana Heung-Min Son, Christian Eriksen iyo Vertonghen.
Kooxaha Chelsea, Man United, Man City iyo Crystal Palace ayaana musharraxiintan ku yeeshay min hal ciyaaryahan, Blues waxaa ugu jira Eden Hazard, Man United waxaa matalaya Eric Bailly, Man City uu u sharraxan yahay Sergio Aguero, halka Crystal Palace uu ugu jiro Christian Benteke.
Haddaba halkaan hoose ka eeg waxqabadka Todobadaan laacib ee bishii la soo dhaafay horyaalka Premier League:-
>- Heung-Min Son wuxuu dhaliyay 5 gool iyo waxaana uu sameeyey hal caawin, halka Eriksen uu 2 gool dhaliyey labo kalena caawiyey, Jan Vertonghen ayaa isna kooxdiisa Spurs ka saaciday inaan shan kulan shabaqeeda la taaban.
>- Laacibka kooxda Chelsea ee Eden Hazard ayaa dhaliyey 4 gool, isla markaana sameeyey hal caawin, halka laacibka ay ka wada tirsan yihiin xulka Belgium oo u dheela kooxda Crystal Palace ee Christian Benteke uu bishii April kooxdiisa isna u dhaliyey 5 gool.
>- Difaaca ugu fiican kooxda Man United ee Eric Bailly oo musharraxiintan isna ku jira ayaa kooxdiisa ka saaciday inaan shabaqeeda la soo taaban bishaas shan kulan.
>- Weeraryahanka kooxda Man City ee Sergio Aguero ayaa ah kan ugu dambeeya ee liiskaan loo soo doortay shan 5 gool ayuuna dhaliyey bishii la soo dhaafay.
Abaal-marinta EA SPORTS Player of the Month waxaa go’aansan doona guddi madax banaan sida khabiirrada ciyaaraha ee Jamie Carragher iyo Thierry Heny iyo codka dadweynaha oo u dhigma 10% codadka guud ahaan la xisaabinayo, kabtannada kooxaha Premier League ayaa iyaguna u codeynaya guuleystaha.
Ciyaaryahanka ku guuleysta abaal-marintan waxaa la shaacin doonaa maalinta Jimcaha ah ee soo aaddan oo ay taariikhdu tahay 12 bishan Maajo 2017.
Lionel Messi oo barbareyn doona Cristiano Ronaldo haddii uu ku guuleyso abaal-marinta…